ဘုန်းကျော်: 03/01/2012 - 04/01/2012
U Myint Hlaing in 2007 (အဝိုင်းပြထားတဲ့လူမဟုတ်ပါ)
﻿ “လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ဆိုပြီး ၁၀ တန်း မအောင်ဘဲ လာထိုင်နေတယ်၊ သူများက ထိုင်ဆိုထိုင်၊ ထဆိုထ၊ ခလုတ်နှိပ်ဆို နှိပ်၊ ဘာမှ မသိ၊ ဘာမှ နားမလည်၊ ရမ်းပြီးလုပ်တာ”
“ဘဏ္ဍာငွေ မရှိရင် ကျနော်လည်း အလုပ်သက်တာတယ်၊ ၀န်ထမ်းတွေလည်းပဲ အလုပ်သက်သာတယ်။ နေရာတကာမှာ နဂ္ဂတစ် ဆိုက်က လုပ်နေလို့မရဘူး”
"ဖြတ်သင့်လို့ ဖြတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် လွှတ်တော်ရဲ့ အဆုံးအဖြတ် နာခံပါ့မယ်။ ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးတွေကိုလည်း လေးစားပါတယ်။ ကျနော် လခလည်း မယူပါဘူး၊ လယ်ထဲ ထည့်သုံးမှာပါ။ ကျနော့်ရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက် လစာတွေလည်းပဲ လယ်ယာမြေထဲပဲ အသုံးပြုမှာပါ”
“ ရှေးခေတ်က ဘုရားကျွန်အဖြစ် ခံယူခဲ့တဲ့သူ ရှိသလိုပါပဲ။ ကျနော့်ကိုယ် ကျနော်လည်း လယ်ကျွန်အဖြစ် ခံယူပါ့မယ်”
"လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ လွှတ်တော်တခုလုံးကိုလည်းပဲ ဘုန်းကြီးရူးနဲ့ လှေလူးလို့ ပြောဆိုသေးတယ်”
ဝန်ကြီး ဦးမြင့်လှိုင်ရဲ့ တော်ကီတွေကို သဘောကြတယ်။ ဝန်ကြီးဆိုတာ ဒါမျိူးပြောရဲဆိုရဲ ဖြစ်ရမယ်။
မိုင်းနားက ဆိတ် တစ်အုပ်။ Kangaroo၊ ဖွတ် ၊ သစ်ကုလားအုပ်၊ ငှက်ကြီးများ နှင့် နွားတွေလည်း ရှိတယ်။ ဘယ်သူမှ ပစ်ပြီးမစားကြပါဘူး။ အလှကြည့်တာပါ။ စားချင်ရင် အချိန်မရွေးပစ်စားလို့ ရပါတယ်။ ပုံပါဆိတ်သားတွေက စားလို့ မကောင်းပါ။
THE LADY AND THE PRESIDENT – (သို့ မဟုတ်) MISSION IMPOSSIBLE
မင်္ဂလာပါ ပုရိဿတ်တို့ 
ဒီအပါတ် ကျနော်တင်ပြတဲ့ အကြောင်းအရာနဲ့ပါတ်သတ်တဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို မြန်မာမှု မပြုတော့ပဲ အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်သာ တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ ကျနော် အမောင်တောသား အင်္ဂလိပ်စာ ဒီပလိုမာ ရထားလို့တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ တလောလေးအတွင်း ဘန်ကောက်မြို့မှာ “THE LADY” ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇတ်ကား ရုံတင်လာတော့ အဲ့ဒီဇာတ်ကားကို အကြောင်းပြုပြီး ခေါင်းစဉ်တပ်လိုက်ရတာပါ။ သို့ သော် -THE LADY- ဇာတ်ကားဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဘ၀ ဇာတ်လမ်း ဆိုတာကိုလည်း လူတိုင်း သိနေပြီး ဖြစ်ကြမှာပါ။
THE LADY - ဇာတ်ကားကို မကြည့်လိုက်မိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ ဘ၀ ဇာတ်လမ်း ဆိုရင်တော့ မဖြစ်မနေ ကြည့်မှာပါ။ ဘာ့ကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသာလျှင် ပြည့်သူခေါင်းဆောင် အစစ်အမှန်ဖြစ်လို့ ပါ။
ဗိုလ်ချုပ်သမီးဖြစ်လို့ဗိုလ်ချုပ်လို သဘောထား မရှိနိုင်ဘူး ဆိုတာကို “အခါမနှောင်းသော်လည်း အလာမကောင်းသော မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ” ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးမှာ “အဖေက လက်နဲ့ ရေး - သမီးက ခြေနဲ့ဖျက် - မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ပျက်ရပြီ” ဆိုသည်ကို ကျနော် တင်ပြခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
THE LADY - ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားကို မကြည့်ဖြစ်ပေမယ့် အဲ့ဒီဇာတ်လမ်းမှာ အဓိက ဇာတ်ကောင် မင်းသမီး - MICHELLE YEHO - ကိုတော့ စိတ်ဝင်စားမိပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ မင်းသမီး - YEHO - ဟာ မလေးရှားနိုင်ငံမှာ မွေးဖွားခဲ့သူ မလေးရှားနှင့် တရုပ်စပ် - တရုပ် ကပြားမလေး ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ သော် သူမ အသက် -၁၅- နှစ် အရွယ်မှာ အမေမိဘတွေက အင်္ဂလန်ကို ပြောင်းသွားတော့ သူမဟာ အင်္ဂလန်မှာ ပညာသင်ခဲ့ရပါတယ်။ သို့ သော်လည်း ၁၉၈၃- ခုနှစ်မှာ မလေးရှားသို့ပြန်လာခဲ့ပြီး မယ်ရွေးပွဲဝင်ခဲ့ရာမှာ မလေးရှားမယ်ဘွဲ့ရခဲ့ပါတယ်။ သူမဟာ အာရှသူတွေထဲက ရှားရှားပါးပါး ဟောလီးဝုဒ် မင်းသမီး ဖြစ်လာခဲ့သူ တစ်ယောက်ပါ။ သူမ သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားတွေ အတော်များများ ရှိပေမယ့် -TOMORROW NEVER DIES- ဆိုတဲ့ ဂျိန်းစဘွန်း - JAMES BOND- ဇာတ်လမ်းထဲက သရုပ်ဆောင်ချက်ကိုတော့ သိပ်ကြိုက်ပါတယ်။ သူမဟာ -၁၉၄၈- ခုနှစ်က အစ -၂၀၁၁- ခုနှစ် အထိမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အဖြစ် ရိုက်ကူးတဲ့ -THE LADY- ဇာတ်လမ်းဟာ နောက်ဆုံးဖြစ်ပြီး ဇာတ်ကားပေါင်း -၃၅- ကားအထိ ရိုက်ကူး သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ် လို့ လဲ သိရပါတယ်။ သူမဟာ -KUNG FU- ဇာတ်လမ်းတွေလည်း သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ဇာတ်ကားရိုက်ရာမှာ လူစားမထိုးပဲ ဇာတ်ကြမ်း ဇာတ်ရမ်းတွေမှာ သူမရဲ့ ပင်ကိုယ်အရည်အချင်းကို ပြသတတ်ပါတယ်လို့ လဲ မှတ်တမ်းမှာ တွေ့ ရပါတယ်။ လူကိုယ်တိုင် သရုပ်ဆောင်မှု သာမက KUNG FU PANDA - ကာတွန်းဇာတ်ကား ဒုတိယပိုင်းမှာ သူမဟာ -အသံအားဖြင့် သရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။ THE LADY- ကို သရုပ်ဆောင်သူနဲ့THE LADY အစစ်ဟာ အရည်အချင်း သိပ်မကွာလှဘူးလို့ဆိုချင်ပါတယ်။
THE LADY- ကိစ္စနဲ့ပါတ်သတ်လာလို့ဇာတ်လမ်းကို သရုပ်ဆောင်ပေးခဲ့သူ -MICHELLE YEHO- အကြောင်း ထည့်ပြီး တင်ပြခြင်းဟာ နှိုင်းယှဉ်ခြင်းတော့ မဟုတ်ပါ။ သို့ သော် အမျိုးသမီး နှစ်ဦးရဲ့ ဘ၀ ဇာတ်လမ်း အစက ခပ်ဆင်ဆင်ပဲလို့ယူဆပြီး အရည်အချင်းကလည်း မကွာလှဟု ယူဆမိလို့ ပါ။ နိုင်ငံခြားမှာ ကြီးပြင်းခဲ့ကြပြီး နိုင်ငံခြားသားနဲ့ ပဲ အိမ်ထောင်ကျခဲ့ကြရ သူတွေပါ။
ယခု THE LADY - အစစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဖက် လှည့်၍ သုံးသပ်ရသော် ယခုတလော ရုပ်မြင်သံကြား နိုင်ငံခြား သတင်းတွေမှာ နေ့ တိုင်း လိုလို ဖေါ်ပြနေကြတာတွေ့ ရပါတယ်။ မှတ်တမ်းတစ်ရပ်မှာ PHILOSOPHY, POLITICES, ECONOMICS. ဆိုတဲ့ ဘာသာရပ်တွေနဲ့ဘွဲ့ ယူခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ နိုင်ငံရေးသမား တစ်ဦး အတွက် အခြေခံအားဖြင့် မသင်မနေရ ဘာသာရပ်တွေပါပဲ။
သို့ သော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေက အံ့သြောစရာတွေ ဖြစ်နေပါတယ်။
ပထမအချက်ကတော့ နအဖ - စစ်အုပ်စုက ရေးဆွဲထားတဲ့ ဒီမိုကရေစီ စနစ်နဲ့မကိုက်ညီတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို လက်ခံခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လို မကိုက်ညီဘူး ဆိုတာကတော့ ရှင်းလင်းလှပါတယ်။ ဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ ဖတ်ဖူးသူတိုင်း သိပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို လိုချင်ကြသော ပြည်သူလူထု၏ ထောက်ခံမှုဖြင့် နိုင်ငံရေး ဇာတ်ခုံပေါ်မှာ ထင်ရှား လာရသူ တစ်ဦးဟာ ပြည်သူ့ ဆန္ဒနှင့် မကိုက်ညီသော လုပ်ရပ်တွေကို လုပ်ဆောင်နေခြင်းဟာ သဘာဝ မကျဘူး ဆိုတာပါပဲ။
ပြည်သူလူထုက စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီကို ရလိုကြောင်း တစာစာအော်ရင်း ပြည်သူ့ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနောက်က သေချင်သေ မရမနေ ရယူမယ် ဆိုတဲ့ဇွဲနဲ့- ယုံကြည်ချက် အပြည့်နဲ့တကောက်ကောက် လိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ ရလာဒ် အဖြစ်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံတွင်သာမက တစ်ကမ္ဘာလုံးကပါ သိကြပြီး ဖြစ်တဲ့ ဒီပဲယင်း အရေးအခင်းဟာ သွေးခင်းသော သစ္စာလမ်း မဟုတ်ပါလား။
မည်သို့ ပင်ဖြစ်စေ ယနေ့ မြန်မာ့ အရေးအခင်းရဲ့ သဘာဝ မကျသော နိုင်ငံရေး ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုတွေကို ကျနော် တင်ပြနေသော်လည်း ယခု လတ်တလော အခြေအနေမှာ ပြည်သူလူထုက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အပြတ်ထောက်ခံနေကြတာကို တွေ့ နေရပါတယ်။
တစ်ချိန်က - မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ဒီမိုကရေစီ နဲ့မတန်သေးပါဘူး - ဟု ဝေဖန်သူတွေ ရှိခဲ့တာကို သတိရမိပါတယ် - ထိုစဉ်က ထိုကဲ့သို့ဝေဖန်သူတွေကို ကျနော် မကျေနပ်ခဲ့ပါဘူး။ သို့ သော် ယခု လက်ရှိ တွေ့ နေရတာက သွေးထွက်အောင် မှန်နေပါပြီ။ ဘာ့ကြောင့်လဲ - ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ပေးတာ ကို ဒီမိုကရေစီလို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေသာမက ၎င်းတို့ ၏ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပါ ယုံကြည်ထားကြပုံ တွေ့ ရ၍ ဖြစ်ပါတယ်။
- လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်၊
- လွတ်လပ်စွာ စည်းရုံးခွင့်၊
- လွတ်လပ်စွာ ရေးသားခွင့်၊
- တူညီသော အခွင့်အရေးတွေ ရရှိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သို့ သော် အခု လက်ရှိ အခြေအနေက ဒီလို မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ အားလုံး သိကြ မြင်ကြတဲ့ အတိုင်းပဲ၊ ကျနော် ပုံကြီးချဲ့ တင်ပြနေစရာ မလိုတော့ပါ။ စစ်အုပ်စုက ဒီမိုကရေစီပါလို့ပြောတိုင်း NLD နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ယောယောင်ပြီး လက်ခံနေတာကိုတော့ မယုံကြည်နိုင်စရာ အချက်တရပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့ ကြောင့်လည်း NLD နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပြန်လည် ဆန်းစစ်စရာ လိုလာပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီ အတု အယောင်ဆိုတာကို သိရက်သားနဲ့ပြည်သူလူထုကိုပါ ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်အောင် ဦးဆောင်နေခြင်းဟာ - ရာဇ၀တ်မှု ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ် စကားနဲ့ပြောရလျှင် - အလိုတူ အလိုပါတွေ - ဒါမှ မဟုတ် သူခိုး လက်ခံတွေလို့ဆိုပါတယ်။
နိုင်ငံရေး ဘာသာရပ်စကားနဲ့ပြောရရင်တော့ - အကျိုးတူ ပူးပေါင်းမှုလို့- ဆိုကြပါတယ်။
ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ လက်ရှိ အဖွဲ့ စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေဟာ - ပြည်သူလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်သော - ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ်များဖြင့် - ပြည်သူ့ အကျိုး အတွက် - ဟု ရေးဆွဲထားသော ဥပဒေ တစ်ရပ် မဟုတ်ဟု နိုင်ငံရေး အုပ်စုတိုင်းက သဘောပေါက် နားလည်ပြီး ကန့် ကွက်တဲ့ အသံတွေ နားထဲမှာ မငြိမ်းသေးမီ NLD နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့ က လက်ခံ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လိုက်ကြ လို့ပါပဲ။
အဲ့ဒီလို ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လိုက်ခြင်းဟာ ပြည်သူလူထု အကျိုးအတွက်လား NLD နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကျိုး အတွက်လား ဆိုတာကတော့ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် ပြောလိုက်တဲ့ စကားကို ကောက်ချက်ချခြင်းအားဖြင့် သိသာ ထင်ရှားလှပါတယ်။
“ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရပြီး ပါလီမန်က သဘောတူလျှင် ၀န်ကြီးရာထူး ပေးမည်တဲ့”
NLD - ဥက္ကဋ္ဌ တစ်ဦး အနေနဲ့ ရော လူထု ခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ ၀ိသေသထူးအရရော ရပ်ကွက်ဒေသတွေ အတွင်း လူထုထောက်ခံမှုကိုရော ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အရွေးခံရဖို့များပါတယ်။ NLD - က ဘယ်နှစ်ယောက်ပဲ အရွေးခံရ ခံရ အမတ်ဦးရေ အနည်းအများက အကြောင်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဦးသိန်းစိန်က လက်မထောင်ပြလျှင် ၀န်ကြီး တစ်နေရာ ရလာတော့မှာ သေချာနေပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ NLD နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုဟာ ပြည်သူလူထု အတွက်လား ၎င်းတို့ ကိုယ်ကျိုး အတွက်လား ဆိုတာ ဗေဒင် မေးနေစရာ မလိုပဲ အထင်အရှား သိမြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအချက်ဟာလည်း နေပြည်တော်မှာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့နှစ်ဦးချင်း တံခါးပိတ်ဆွေးနွေးမှုရဲ့ ရလာဒ် ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံက ပြည်သူလူထုကြီးကို ကျနော် တင်ပြနေခြင်းဟာ ကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အတုအယောင် ဒီမိုကရေစီ သံသရာဝဲထဲမှာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့NLD - ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လှည့်စားမှုတွေကို တံလျှပ်ကို ရေထင်ပြီး ရွှေသမင် အလိုက်မမှားကြစေလို၍ ဖြစ်ပါတယ်။ နမူနာ အဖြစ် တင်ပြရလျှင် ဒီမိုကရေစီ စနစ်ရဲ့ တည်တန့်ခိုင်မြဲမှုမှာ နိုင်ငံရေးသမား ဆိုသူတွေဟာ *TRANSPARENCY* ဆိုတဲ့ သံသယ ရှိစရာ မလိုသော - ထင်ရှား သိသာသော အမူအကျင့် ရှိဖို့ လိုပါတယ်။ ဆိုလိုတာက သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့NLD - ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့နှစ်ကိုယ်တူ တံခါးပိတ် ဆွေးနွေးချက်တွေဟာ ပြည်သူလူထု သိရှိဖို့ လိုတယ် ဆိုတာပါ။
ဘာ့ကြောင့်လဲ သူတို့နှစ်ဦးဟာ လူဦးရေ သန်း -၅၀ ကျော်ရဲ့ အနာဂါတ်တွေကို ပုလင်းထဲ ထည့်ပြီး ကိုင်ထားကြသူတွေမို့ပြည်သူလူထုဟာ ဒီမိုကရေစီ စနစ်အရ သိပိုင်ခွင့် ရှိပါတယ်။ ဒီကိစ္စဟာ စစ်ရေး စစ်ရာလို လျှို့ ဝှက်ချက် မဟုတ်ပါဘူး။ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ဟာ သမ္မတ ဖြစ်ပေမယ့် စစ်အုပ်စု ကိုယ်စားလှယ်မို့မပြောချင်လည်း နေပါစေ - လူထုခေါင်းဆောင်လို့နာမ၀ိသေသန တပ်ခံရတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကတော့ ပြည်သူလူထုကို ပွင့်ပွင့် လင်းလင်း တင်ပြဖို့ လိုပါတယ်။ - TRANSLUCENT- လို့ပြောကြတဲ့ မှုံဝါးဝါးတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ် ဗဟိုရဲ့ ဦးစီး အဖွဲ့ အစည်းအဝေးမှာ ပြောခဲ့တဲ့ စကား တစ်ရပ်မှာ --
ကျမတို့ ပါတီရဲ့ အနာဂါတ်အတွက် ကျမတို့လုပ်နေတဲ့ ကိစ္စ မဟုတ်ပါဘူး - ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှု တစ်ခုထဲရဲ့ အနာဂါတ် အတွက် ကျမတို့လုပ်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ကျမတို့ နိုင်ငံရဲ့ အနာဂါတ် အတွက် ကျမတို့လုပ်နေတယ် ဆိုတာကိုတော့ အဲ့ဒါကို တော့ စွဲစွဲ မြဲမြဲ ခေါင်းထဲမှာ ထားစေချင်ပါတယ်။
ဒီစကားချပ်ဟာ မြန်မာဘာသာ စကားကို မြန်မာလို ပြန်ရဦးမယ့် စကား ဖြစ်နေပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ - မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနာဂါတ်ဟာ စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီ စနစ်ဖြင့် အုပ်ချုပ်တဲ့ အစိုးရ ရှိဖို့လိုအပ်ပြီး စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီ စနစ် သည်သာလျှင် ကြီးပွားတိုးတက်သော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ မှသာ ပြည်သူလူထု လူနေမှု အဆင့် မြင့်တက်လာပြီး ကမ္ဘာ့အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံစာရင်းက လွတ်မြောက်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ဖြစ်မြောက် အောင်မြင်လာရေးအတွက် ကျစ်လစ် ခိုင်မာပြီး ပြည်သူလူထုဘက်မှာ အမြဲတန်းရပ်တည် သွားရမယ့် နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ရပ် ရှိဖို့ လိုပါတယ်။
ထို့ ကြောင့် နိုင်ငံရေး ပါတီတိုင်းဟာ ပါတီရဲ့ အနာဂါတ် အတွက် အလုပ်လုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ အနာဂါတ် လုပ်ငန်းဆိုတာ စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီ စနစ် ဆက်လက် တည်တန့် သွားဖို့အတွက် ပြည်သူလူထုကို ဦးဆောင်သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီတော့ ပြည်သူလူထု အရေးသည် ပါတီရဲ့ နိုင်ငံရေး ဖြစ်သလို ပြည်သူလူထုသည် ပါတီဝင်များ ဖြစ်လာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပါတီဝင် ပြည်သူလူထု များလေလေ နိုင်ငံရဲ့ အနာဂါတ် လုပ်ငန်းတွေ အောင်မြင်ဖို့အင်အား ကောင်းလေ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ ကြောင့် ပါတီရဲ့ အနာဂါတ်နဲ့နိုင်ငံရဲ့ အနာဂါတ်ဟာ တစ်ထပ်တည်း ဖြစ်နေရမည် ဖြစ်ပြီး ပြည်သူနှင့် ပါတီလည်း တလုံးတစည်းထည်း ဖြစ်နေရပါမယ်။ သို့ သော် နိုင်ငံရေးပါတီဝင် တစ်ဦးသည် ပါတီနိုင်ငံရေး အကြောင်းပြပြီး မိမိကိုယ်ကျိုးအတွက်သာ မဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကတော့ ကျနော့ အမြင်ပါ။
သို့ သော် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ စကားကတော့ တစ်မျိုးကြီး ဖြစ်နေပါတယ်။ ပညာရှိစကားကို တောသား နားမလည်ဘူးလို့ဆိုရလေမလားပဲ။ ဒါမှ မဟုတ် နိုင်ငံရဲ့ အနာဂါတ်ကို - မိကျောင်းတစ်ပိုင်း၊ ငါးမန်းတစ်ပိုင်း - စစ်အုပ်စု ဒီမိုကရေစီနဲ့ရှေ့ဆက်သွားဖို့ဆိုလိုတာလား ဆိုတာ စဉ်းစားစရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် ယခု လက်ရှိ အခြေအနေသည် “ဒီမိုကရေစီ” ဖြစ်နေပါပြီလို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်ပုံရပါတယ်။ ဒါကလည်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်တို့အုပ်စုက NLD - ကို ပါတီ အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ခွင့် ပြုပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်း ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်ခွင့် ပြုလိုက်လို့ လဲ ဒီအချိုးမျိုး ပြောပုံရပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့်လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ရွေးကောက်ပွဲ ပြုလုပ်ပေးတာကို ဒီိမိုကရေစီ ဖြစ်ပြီလို့လက်ခံထားသူ ဖြစ်ဟန်တူကြောင်း ကျနော် တင်ပြခဲ့ပြီးပါပြီ။
NLD - ပါတီဝင်တွေနဲ့ထောက်ခံသူတွေက ကျနော်ဒီလို တင်ပြတာကို ၀ိုင်းဆဲကြမှာ သေချာပါတယ်။ သည်းခံကြပါခင်ဗျား - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရယ် - ဒီမိုကရေစီရယ် - ရွေးကောက်ပွဲရယ်ဟာ နိုင်ငံတော် အနာဂါတ် ကာလကြီးပွားတိုးတက်ရေး အတွက် ကြီးမားသော အထောက်အကူတစ်ရပ် ဖြစ်ပေမယ့်လည်း - လက်ရှိ ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေကြီးဟာ မဟာတံတိုင်းကြီးသဖွယ် ရာသက်ပန် အတားအဆီးကြီး ဖြစ်နေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ယခုလက်ရှိ အခြေအနေမှာ NLD နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ လက်ရှိ ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေကို လက်ခံလိုက်ကြပြီ ဆိုတော့ ပြည်သူလူထုဟာ မိမိတို့ ဘ၀ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင် ဟောကြားခဲ့သလို “အတ္တာဟိ အတ္တနော နာထော ကောဟိနာထော ပရောသိယာ” ဆိုတဲ့ ဟောပြောချက်ကို ပြန်လည် သတိရကြဖို့ နဲ့ - တူနီးရှား၊ အီဂျစ်၊ လစ်ဗျား၊ ဆီးရီးယား နိုင်ငံတွေက ပြည်သူလူထုတွေကို နမူနာ ယူကြစေလိုပါတယ်။ NLD - နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကတော့ ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ တံတိုင်းကြီးမှာ အုတ်ချပ် အဖြစ် ပါဝင်သွားပြီ ဆိုတော့ အားကိုးအားထား ပြုဖို့မျှော်လင့်ဖွယ် မရှိတော့ပါဘူး။
NLD - နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့အပြောင်းအလဲကို ထောက်ပြရလျှင် နေပြည်တော်မှာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့တွေ့ ဆုံကြတဲ့ အချိန်က စပြီး ဖြစ်လာပါတယ်။ အဲ့ဒီ နောက်ပိုင်းမှာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် တစ်ကွ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ကပါ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံ အဖြစ်သို့ပြုပြင် ပြောင်းလဲနေပါပြီဟု ကမ္ဘာအသိ ကြေငြာခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ကြေငြာချက်တွေ အပေါ် တုန့် ပြန်ချက် အနေနဲ့ဥရောပ ယူနီယံ အုပ်စုက ငွေကြေး အကူအညီ ပေးမည်ဟူသော ကတိသာမက စစ်အုပ်စု ထိပ်တန်း ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပါ ပြည်ဝင်ခွင့် ဗီဇာပေးမယ်လို့ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံကလည်း အထူးလျော့ပေါ့သော အားဖြင့် သံတမန် ဆက်ဆံရေး အဆင့် တိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။
မည်သို့ ပင်ဖြစ်စေ - ဇန်န၀ါရီလ -၃၀- ရက်နေ့နိုင်ငံခြား သတင်းတွေမှာ မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရက နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေကို -၈- နှစ် အထိ အကောက်ခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးမယ် လို့စက်မှု လက်မှု ဌာန ၀န်ကြီးက - WORLD ECONOMIC FORUM - အစည်းအဝေးမှာ ပြောခဲ့ပါတယ်။
ဒီသတင်းကို ဖတ်ပြီး ကျနော် အတော် တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားသွားပါတယ်။ ဒီလို အတွေး အခေါ်နဲ့စက်မှု လက်မှု ဌာန၀န်ကြီး နေရာ ပေးတာဟာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ဦးနှောက်ထဲမှာ စစ်အုပ်စု အဆက်ဆက် ဦးနေ၀င်း က အစ ဦးသန်းရွှေ အထိ သူ့ ဆရာကြီးတွေ ထက် မသာဘူးဆိုတာ ထင်ရှားစေပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဦးနေ၀င်း အာဏာသိမ်းခဲ့သည်မှ အစ ယနေ့ အထိ မြန်မာနိုင်ငံ အုပ်ချုပ်ရေးကို စစ်အာဏာရှင်များ အပိုင်စီးထားစဉ် ကာလ တစ်လျောက် မြန်မာနိုင်ငံဟာ အာရှမှာ သာမက ကမ္ဘာ့အဆင့်မှာပါ တိုးတက်ဖွံ့ ဖြိုးမှု အနည်းဆုံး နိုင်ငံ - တနည်းအားဖြင့် အဆင်းရဲဆုံး နိုင်ငံ စာရင်းထဲ ပါသွားပါတယ်။ ဒါဟာ အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစားရဲ့ အရည်အချင်းကို ထင်ရှားစေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းအရင်းကတော့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ သဘာဝ ပစ္စည်း အပေါဆုံး နိုင်ငံ ဖြစ်လျက် အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစား အသိပညာ မရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်။
စောဒက တက်စရာ ရှိပါတယ် - အရင်းအနှီး မရှိရင် ဖွံ့ ဖြိုးမှု ဘယ်လို လုပ်မှာလဲ - လိုအပ်တဲ့ အရင်းအနှီးနဲ့နည်းပညာတွေကို နိုင်ငံခြားသား အရင်းရှင်တွေဆီက လက်ခံရမှာပဲလို့ဆိုကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီလို စောဒက မျိုး တက်လာမယ်ဆိုရင် ကျနော် လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ အကြောင်းရင်းကတော့ လူသားတွေရဲ့ တိုးတက်ကြီးပွားမှုမှာ - လွတ်လပ်မှု၊ တရားမျှတမှု၊ တူညီသော အခွင့်အရေး ရရှိမှု၊ ဘ၀လုံခြုံမှု - အစရှိသော အချက် -၄- ချက် အပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။
လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင် အတွေးအခေါ် အယူအဆတွေ ရှိကြပါတယ်။ လွတ်လပ်မှု မရှိရင် ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းတွေ ထုတ်ဖေါ်ခွင့် မရတော့လို့- အပွင့်ပွင့်ရမယ့် သစ်ပင်ဟာ ပွင့်ခွင့်မရ - ပွင့်ခွင့်မရလျှင် အသီး အဖြစ်လာနိုင်တော့ သလို ဘ၀ အညွှန့် တုံးသွားပါတယ်။ ထို့ ကြောင့် ပထမ အရေးကြီးဆုံး အချက်ဟာ လွတ်လပ်မှု လို့ဆိုရခြင်းပါ။
လွတ်လပ်မှု ရှိသော်လည်း တရားမျှတမှု မရှိလျှင် အပင် က ပွင့်လာတဲ့ အပွင့်ကို ပိုးမွှား တိရစ္ဆာန်တွေ ဖျက်ဆီးသလို အဖျက်ခံရမယ် - ကြီးနိုင်ငယ်ညှင်း - ငါးငယ်ကို ငါးကြီး စားသလို ဖြစ်သွားပါမယ်။ ထို့ ကြောင့် တရားမျှတမှုဟာ ဒုတိယ အရေးအကြီးဆုံး အချက်လို့တင်ပြရပါတယ်။
စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး - အရေးတိုင်းမှာ ယှဉ်ပြိုင်မှု ရှိကြပါတယ်။ ထိုယှဉ်ပြိုင်မှု တွေမှာ တူညီသော အခွင့်အရေးတွေ လိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာ နှိုင်းယှဉ်ပြရလျှင် အပြေးပြိုင်ပွဲ တစ်ခုမှာ အားလုံးဟာ သတ်မှတ်ထားသော မျဉ်းပေါ်မှာ အစနေရာယူပြီး တာထွက်ချိန်မှာလည်း တစ်ပြိုင်ထည်း ထွက်ရသလို ပန်းတိုင်ရောက်ရန်မှာ ယှဉ်ပြိုင်သူရဲ့ အရည်အချင်းမှာ မူတည်သလိုပါပဲ။ လောကကြီးမှာ လူအများစုဟာ တူညီသော အခွင့်အရေး မရလို့တိုးတက် ဖွံ့ ဖြိုးခွင့် မရကြရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ ကြောင့် တူညီသော အခွင့် အရေးဟာ တတိယ အရေးကြီးသော အချက်လို့ဖေါ်ပြရခြင်းပါ။
အထက်ဖေါ်ပြခဲ့ပါ အချက် -၃- ချက် ရှိသော်လည်း ဘ၀ လုံခြုံရေး မရှိသော ဒေသမှာ လူ့ ဘ၀ ဆိုတာ ချောက်ကမ်းပါးမှာ ရပ်နေရသူလိုပါပဲ။ ဘ၀ဆိုတာ အမြဲတမ်း သဲထိပ်ရင်ဖို ဖြစ်နေရပြီးထာဝရ ငရဲ ကျနေသလို ဖြစ်နေမှာပါ။
ထို့ ကြောင့် ဖေါ်ပြပါ အချက် -၄- ချက် လိုအပ်ကြောင်း တင်ပြရခြင်းပါ။ ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံ နေရာ အနှံ့အပြား ထို အချက် -၄- ချက် ပြည့်စုံမှု ရှိ မရှိဆိုတာ ပြည်သူတွေ အသိဆုံးပါ။
မည်သို့ သော အခွင့်အရေးတွေကို ပေးပေး နိုင်ငံခြားသား အရင်းရှင်များ အနေဖြင့် ရင်းနှီးမြုပ်နှံဖို့ဆိုသည်မှာ လွယ်လွယ်ကူကူ ဆုံးဖြတ်ချက် ချရိုးထုံးစံ မရှိပါ။ အရင်းအနှီးဆိုသည်မှာ မြုပ်ချလိုက်ပြီးလျှင် အရင်းပြန်ပေါ်လာဖို့အချိန်ယူလုပ်ဆောင်ရပါတယ်။ အမြတ်ရဖို့ ဆိုသည်မှာလည်း စောင့်ဆိုင်းရပါတယ်။ မတော်တဆ ဖြစ်ခဲ့လျှင် ဘ၀ပျက်သွားနိုင်တယ်။ ထို့ ကြောင့် ကမ္ဘာ့ ရင်းနှီး မြုပ်နှံသူတွေကို လမ်းညွှန်ပေးနေတဲ့ ဆရာကြီးတွေ - လေ့လာရေး ဌာနကြီးတွေ ရှိပါတယ်။ ထို့ ကြောင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ သူတို့ ယုံကြည် ကိုးစား အားထားရတဲ့ ဆရာကြီးတွေရဲ့ လမ်းညွှန်မှုကို လေးစား လိုက်နာကြပါတယ်။ စက်မှုလက်မှု ၀န်ကြီးဌာနက မြန်မာအစိုးရရဲ့ သဘောထားကို အလွန်အရေးပါလှတဲ့ - WORLD ECONOMIC FORUM- မှာ ပြောခဲ့ယုံတင်မက သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပါ ထိုကိစ္စကို ထပ်မံ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခဲ့ကြပြီး နိုင်ငံခြားသား ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများကို ဖိတ်ခေါ်ခြင်း - အာမခံချက်ပေးခြင်းတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
အထူးသဖြင့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ စင်္ကာပူ သွားရောက်တဲ့ ခရီးစဉ်မှာ နာမည်ကြီး သတင်းစာ တစ်စောင်နဲ့တွေ့ ဆုံ မေးမြန်းခန်းမှာ မိန့် ကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အထူးခြားဆုံးကတော့ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ရေး ကိစ္စနဲ့အစုရှယ်ယာ ဈေးတည်ထောင်ရေး ကိစ္စတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
အမှန်ကို အမှန်အတိုင်း - အရှိကို အရှိအတိုင်း ဝေဖန်ရရင်တော့ ဆင်ခေါင်းဟာ ဘယ်လောက် ကြီးနေသော်လည်း အထဲက ဦးနှောက်ဟာ လူသားထက် ငယ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ဦးခေါင်းပုံသဏ္ဍာန်က ကြီးမားပုံရပေမယ့် ဦးနှောက်က ဆင်ဦးနှောက်လောက်ပဲ ရှိပုံရပါတယ်။
နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကြီး တစ်ယောက်ကို မသမာသော စိတ်ဖြင့် ဝေဖန်ခြင်း မဟုတ်ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ငွေကြေး ပြဿနာကို ကိုယ့်ဖာသာ မဖြေရှင်းပဲ သူခိုးကို ဘဏ္ဍာစိုး ခန့် အပ်ခြင်းကို လက်မခံနိုင်လွန်းလို့ဝေဖန်မိတာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့စင်္ကာပူ အစိုးရဟာ အထူးရင်းနှီးမှု ရှိခဲ့တယ်ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်း သိကြပါတယ်။ ထို့ ကြောင့် ငွေကြေး ကိစ္စစီမံ ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာ အထူးကျွမ်းကျင်တဲ့ စင်္ကာပူနိုင်ငံရဲ့ အကူအညီ ရလို၍ မြန်မာနိုင်ငံသမ္မတကြီး စင်္ကာပူကို သွားခဲ့တယ်ဆိုတာ သိသာလှပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း သူခိုးကို ဘဏ္ဍာစိုး ခန့် တယ်လို့ပြောတာပါ။
စင်္ကာပူအစိုးရရဲ့ ငွေကြေးဆိုင်ရာပိုင်းကို ကိုင်တွယ်လှုပ်ရှားဖို့-TEMASEK HOLDINGS- ဆိုတဲ့ ကုမ္ပဏီ ကြီးကို ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ ၎င်းအပြင် စင်္ကာပူ အစိုးရပိုင် -GOVERNMENT CORPORATION : GIC - ဆိုတာလည်း ရှိပါတယ်။ သို့ သော် နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးလောကမှာ အထူးသဖြင့် အာရှတစ်ခွင်မှာ ရှိတဲ့ ငွေကြေး ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု အမြောက်အများ အသုံးချရတဲ့ လုပ်ငန်းတွေမှာ လက်ဝါးကြီးအုပ်ဖို့အသင့်ရှိနေပါတယ်။ - ဘာ့ကြောင့်လည်းဆိုတော့ -TEMASEK HOLDINGS- ရဲ့လက်ထဲမှာ စင်္ကာပူဒေါ်လာ သန်းပေါင်း -၁၉၃- ဘီလီယံ သို့ မဟုတ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း -၁၅၇- ဘီလီယံ ရှိနေတဲ့ အပြင် အဆင့်မြင့် အလုပ်သမား -၄၀၀- ကျော်လည်း ရှိနေပါတယ်။
၎င်း -TEMASEK HOLDINGS- ရဲ့ အဓိက လုပ်ငန်းတွေကတော့ -FINANCIAL SERVICES, TELECOMMUNICATION နှင့် MEDIA တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ မျှမက BANK OF CHINA STANDARD CHARTERED- အစရှိသော ထိပ်တန်း ဘဏ်ကြီးတွေမှာလည်း အစုရှယ်ယာတွေ ပါဝင်ထားပါတယ်။ ထို့ ကြောင့်လည်း -၂၀၀၄- ခုနှစ် -TEMASEK HOLDINGS- ရဲ့ အမြတ်ငွေဟာ စင်္ကာပူဒေါ်လာ -၇.၄- ဘီလီယံ သို့ မဟုတ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ -၄.၄- ဘီလီယံ အထိ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဘဏ်လုပ်ငန်း ဆိုတာ ရွှေဆိုင်လိုပါပဲ - ရွှေဆိုင်မှာ ကျနော်တို့ က ရောင်းရင်လည်း အမြတ်ယူထားတယ်၊ သူ့ ဆီမှာ ၀ယ်ရင်လဲ အမြတ်ယူထားတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရွှေဆိုင်လုပ်ငန်းဟာ အရှုံးမရှိသလို ဘဏ်လုပ်ငန်းဟာလည်း အရှုံးမရှိပါဘူး။
လွန်ခဲ့တဲ့ -၂၀၀၆- ခုနှစ်တုန်းက ၎င်း TEMASEK ကို CEO အဖြစ် အုပ်ချုပ်ထားသူကတော့ စင်္ကာပူ ၀န်ကြီးချုပ် LEE HSIEN LOONG ရဲ့ ဇနီး MADAME HO CHING ဖြစ်ပါတယ်။ သူမ လက်ထက်မှာ ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် -THAKSIN SHINAWATRA- နဲ့မိသားစုပိုင် -SHIN CORPORATION- ကုမ္ပဏီ ရှယ်ယာတွေ ၀ယ်လိုက်ပြီး ယခုအချိန်အထိ ၎င်းကုမ္ပဏီကို အပိုင်စီးထားဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၀န်ကြီးချုပ် -THAKSIN- ကတော့ ၎င်း အစုရှယ်ယာတွေ ရောင်းဝယ်မှုနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး ပြည်သူလူထုက ဆန္ဒပြကြရာမှ နောက်ဆုံး အာဏာသိမ်းခံရတဲ့ အထိ ဖြစ်ခဲ့ရုံမက အစုရှယ်ယာ ရောင်းရတဲ့ ငွေထဲက ဘတ်ငွေ သန်းပေါင်း -၄၀၀၀၀- ကျော် အသိမ်းခံလိုက်ရပါတယ်။ ထိုဆန္ဒပြပွဲတွေ ဖြစ်နေစဉ် ကာလမှာ စင်္ကာပူဝန်ကြီးချုပ် -LEE HSIEN LOONG နှင့် MADAME HO CHING တို့ ရဲ့ ရုပ်တုများကို ဘန်ကောက်မြို့လည် လမ်းမကြီးပေါ်မှာ မီးရှို့ ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ မည်သို့ ပင်ဖြစ်စေ ၎င်း TEMASEK ကုမ္ပဏီ CEO အဖြစ်မှ -၂၀၀၉- ခုနှစ်မှာ MADAME HO CHING နှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီး အမေရိကန်လူမျိုး CHARLES W.GOODYEAR- ကို နေရာပေးခဲ့ပါတယ်။ အတိုချုပ်ကို ပြောရရင်တော့ - စင်္ကာပူ- တရုပ်- အမေရိကန် - ၃- နိုင်ငံဟာ -TEMASEK- ကုမ္ပဏီမှာ ပူးတွဲဆောင်ရွက်နေကြတယ် ဆိုတာပါပဲ။
WORLD ECONOMIC FORUM- အစည်းအဝေးမှာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ - အကောက်ခွန် -၈- နှစ် ကင်းလွတ်ခွင့် ပေးမယ် ဆိုတဲ့ ထုတ်ဖေါ် ပြောကြားချက် ထွက်ပေါ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ - သို့ မဟုတ် - ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က -2012- WORLD ECONOMIC FORUM- သို့ ပြောကြားတဲ့ “MYANMAR HAD THE ‘RARE AND PRECIOUS OPPORTUNITY TO REACH A GREAT TRANSFORMATION’ - ဆိုတဲ့ သမိုင်းဝင် ၀ါဓက ကြီးထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ အင်္ဂလန်နိုင်ငံက -MAPLECROFT- ဆိုတဲ့ သုတေသနဌာနကြီးက -၈-၂-၁၂- ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက် တစ်ရပ်တွင် ဖေါ်ပြထားသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ဖို့မသင့်ဆုံး နိုင်ငံလို့ဆိုထားပါတယ်။ အကြောင်းရင်းကတော့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ သဘာဝ သယံဇာတ ပစ္စည်း ပေါကြွယ်ဝပေမယ့်လည်း ဥပဒေ စိုးမိုးရေးပိုင်း တနည်းအားဖြင့် တရားမျှတမှု အပိုင်းမှာ အလွန်အားနည်းနေသေးသောကြောင့်လို့ဆိုထားပါတယ်။
ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း -၁၉၇- နိုင်ငံထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံဟာ တရားမျှတမှု အနည်းဆုံး နိုင်ငံစာရင်းမှာ ပါဝင်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ ရှိရသည်ဟု ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
စီးပွားရေးနှင့် တရားမျှတမှုဆိုသည်မှာ ဒွန်တွဲနေပြီး တရားမျှတမှု မရှိသော နိုင်ငံသည် အမိုးပျက်စီးနေသော အဆောက်အဦးနှင့် တူပါတယ်။
ထို့ ကြောင့် MAPLECROFT- သုတေသန ပြုလုပ်ထားတဲ့ စီးပွားရေး မလုပ်သင့်တဲ့ နိုင်ငံတွေကတော့ -ANGOLA, ARGENTINA, INDONESIA, MALAYSIA, MYANMAR, UKRAINE နိုင်ငံတို့ပါဝင်ကြောင်း ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ FATF - ခေါ် FINANCIAL ACTION TASK FORCE- အဖွဲ့ ကြီးကလည်း မြန်မာနိုင်ငံဟာ ငွေမဲတွေ ငွေဖြူဖြစ်အေင် ခ၀ါချတဲ့နေရာမှာ အဓိက ဌာနချုပ်ကြီး ဖြစ်နေကြောင်း ထုတ်ဖေါ်ကြေငြာထားပါတယ်။ ငွေခ၀ါချရုံတင်မက ကမ္ဘာ့အကြမ်းဖက် ဂိုဏ်းတွေရဲ့ ငွေတွေ ရွှေ့ပြောင်းတာရော - ငွေပွားအောင် လုပ်တာရော- အမှောင်လုပ်ငန်းတွေ ဆုံစည်းရာ နေရာလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
FATF - အဖွဲ့ ကြီးက ယခုနောက်ဆုံး -၂၀၁၂- ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ကြေငြာချက်မှာ ပါဝင်တဲ့ နိုင်ငံတွေကတော့ - ANGOLA, ARGENTINA, INDONESIA, MALAYSIA, MYANMAR နဲ့UKRAINE နိုင်ငံတို့ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံမှာ ဒေါ်လာသန်းရာချီပြီး၊ ထောင်ချီပြီး ရင်းနှီးမြုပ်နှံကြမယ့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ သယ်ယူပို့ ဆောင်ရေး၊ သယံဇာတ - လူသားသယံဇာတရော၊ သဘာဝ သယံဇာတ တို့ အပြင် ကမ္ဘာ့ဇုံ အနေအထားကိုပါ လေ့လာကြရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့ ဇုံအရ အလွန်ကောင်းတဲ့ နိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ကမ္ဘာ့လူဦးရေ အများဆုံး နိုင်ငံကြီး နှစ်နိုင်ငံနဲ့လက်ဝဲ လက်ယာမှာ နယ်မြေ ဆက်စပ်နေသဖြင့် ရောင်းအား ၀ယ်အား အလွန်ကောင်းလှပါတယ်။ ကျနော်တို့အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံဟာဆိုရင် - အပ်က အစ၊ မော်တော်ကားအထိ ထုတ်နိုင်ပေမယ့် ကမ္ဘာ့အနောက်ဖက်ခြမ်းကို ကုန်တင်ပို့ မယ်ဆိုရင် မလက္ကာ ရေလက်ကြားက တဆင့် စင်္ကာပူက ပါတ်ပြီး ပို့ နေရသောကြောင့် ဘန်ကောက် ဆိပ်ကမ်းနဲ့ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း ခရီးလမ်း အကွာအဝေးဟာ ကုန်တင်စရိတ်ကွာခြားချက် ကွာလွန်းသည်ကို တွေ့ ရပါမယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး လက်အောက်မှာ နှစ်ပေါင်း ၅၀- လောက် ရောက်မနေဘူးဆိုရင် အခုအခါမှာ တောင်ကိုရီးယားထက် သာနေမယ် ဆိုတာ ကျနော် ပြောရဲပါတယ်။ ကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ အလွန်ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့တဲ့ မဟာ ပြဿနာကြီးကတော့ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ကိစ္စပါပဲ။
TRANSPARENCY INTERNATIONAL အဖွဲ့ ကြီးရဲ့ ထုတ်ဖေါ်ချက် အရ ကမ္ဘာ့CORRUPTION ခေါ် အကျင့်ပျက် လာဘ်စားမှု အများဆုံးနိုင်ငံစာရင်း အဆင့်ကို သတ်မှတ်ထားသည်မှာ အံ့အောစရာ ကောင်းလှပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံပေါင်း -၁၈၂- နိုင်ငံမှာ နံပါတ် -၁၈၀- မှာ ပါရှိသောကြောင့်ပါ။ ဒီလိုဆိုတော့ တစ်နိုင်ငံလုံး အကျင့်ပျက်တယ်လို့အဓိပ္ပါယ်ရှိပါတယ်။ ဆေးပညာ စကားနဲ့ပြောရရင်တော့ -CORRUPTION VIRUS- ရောဂါပိုး အများဆုံး နိုင်ငံလို့ဆိုလို ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ ပြန်လည် ထူထောင်ရေးမှာ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်ပိုင်းဟာ နိုင်ငံခြားသား ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေကို မက်လုံးပေးပြီး ဖိတ်ခေါ်နေရုံနဲ့မပြီးသေးပါ။ လိုအပ်တဲ့ ပြင်ဆင်မှုတွေ အရင်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ အဲ့ဒီ ပြင်ဆင်မှုတွေထဲမှာ အရေးအကြီးဆုံးက - စေတနာမှန်၊ နေရာမှန်၊ လူမှန်တွေကို ၀န်ကြီးနေရာတွေ ပေးအပ်ဖို့လိုပါတယ်။ နေရာရပြီး အလုပ်မလုပ်တတ်ပဲ စားတာတစ်ခုထည်းကိုသာ တတ်တဲ့ လူတွေကို ဖယ်ရှားပြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဥပမာ မြန်မာ့ငွေကြေးပြဿနာကို ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးက စီစဉ်ဖြေရှင်းဖို့ ၊ စီမံအုပ်ချုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ နှလုံးသား ဖြစ်တဲ့ ဘဏ္ဍာရေးကိစ္စကို အခြားနိုင်ငံ တစ်ခုကို လွှဲအပ်ပြီး စီမံခန့် ခွဲမှု ပြုမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံတော်ရဲ့ လုံခြုံရေးကို ထိခိုက်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြည်သူလူထုဆင်းရဲမွဲတေမှုက လွတ်မြောက်စေဖို့- အလုပ်လက်မဲ့ ပြဿာ ဖြေရှင်းဖို့ ၊ နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေကို မက်လုံးပေး ခေါ်ယူနေခြင်းဟာ စစ်မှန်သော စီးပွားရေး သမားတွေမလာပဲ စီးပွားရေး အချောင်သမားတွေသာ ၀င်ရောက်လာပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ပြောခဲ့သလို “ဖာနိုင်ငံ ဖြစ်ဖို့ ” လမ်းဖွင့်ပေးသလို ဖြစ်နေပါတယ်။
၂၂-၃-၁၂ ရက်နေ့ က ကော့မှူးမြို့နယ်မှာ ကမ္ဘာကျော် နိုင်ငံရေးသမားကြီး တစ်ဦး ပြောသွားတာက “ကော့မှူးမြို့နယ်မှာ အလုပ်လက်မဲ့များပြီးတော့ စီးပွားရေး အခြေအနေ အတော်ဆိုးနေတာ တွေ့ ရတယ်၊ ကော့မှူးမြို့နယ်က မဲဆန္ဒရှင်အားလုံး အတွက်ကို ကျမမြို့နယ် ဖြစ်တဲ့ အတွက် မြန်မာပြည်မှာ ကျမ မြို့နယ်က နေ စပြီး အဲ့ဒါတွေကို ပြုပြင်ပေးချင်တယ်၊ ကျမ တာဝန်ကျေအောင် ထမ်းဆောင်ပါ့မယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကော့မှူးမြို့က လူထု မဲပေးမှသာလျှင် မြန်မာတစ်ပြည်လုံးအတွက် အဲ့ဒီတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်” အဲ့ဒီလို ပြောဟောသွားတယ်လို့သတင်းမှာ ရေးသားထားပါတယ်။
ဒီစကားရပ်ဟာ -PROFESSIONALISM- ကြေးစားနိုင်ငံရေး သမားတွေ ပြောနေကြ စကား ဖြစ်ပါတယ်။ မစားရ ၀ခမန်း ၊ ဖြစ်နိုင် အဖြစ်နိုင် အပထား - မိမိ မဲရဖို့ အတွက် မက်လုံးပေး ပြောသော တနည်းအားဖြင့် ပြည်သူလူထုကို လာဘ်ထိုးခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
မည်သည့် နိုင်ငံမှာမဆို အဲ့ဒီလို ကြေးစား နိုင်ငံရေးသမားတွေကြောင့် နိုင်ငံတိုးတက်မှုတွေ ဆုတ်ယုတ်ခဲ့ကြရတာ လေ့လာတွေ့ ရှိနေရပါတယ်။ နိုင်ငံရေး သမားဆိုတာ -VOLUNTEER- ခေါ် စေတနာဝန်ထမ်း များသာ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။
သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် ဆိုသူကလည်း မြန်မာနိုင်ငံမှာ အစုရှယ်ယာ ဈေးဖွင့်ပေးမယ်လို့ ပါ ပြောသွားသည် ဟုလည်း နိုင်ငံခြား သတင်းမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန် - မိုးခါးရေ သောက်မိပြီထင်ပါတယ်။
အစုရှယ်ယာဈေး - ဆိုသည်မှာ တရားဝင် လောင်းကစားပွဲ တစ်ရပ်သာဖြစ်ပြီး ငွေအားနဲသူတွေရဲ့ သင်္ချိုင်းသာ ဖြစ်တယ် ဆိုတာ သမ္မတကြီး မသိလိုက်ဘူး ထင်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အစုရှယ်ယာ ဈေးကွက်ဖွင့်ရန် အချိန်မတန်သေးဘူးလို့တင်ပြပါရစေ။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ပြဿနာတွေကတော့ - ပြောမဆုံးပေါင် တောသုံးတောင် - ဆိုသလိုပါပဲ။
THE LADY နဲ့THE PRESIDENT တို့ ရဲ့ လှုပ်ရှားပြောဆို ဆောင်ရွက်နေပုံတွေဟာ - နိုင်ငံတကာ အမြင်မှာ ပွင့်သစ်စပန်းလေး တစ်ပွင့်လို ဖြစ်နေပေမယ့် ကျနော့ အမြင်မှာကတော့ -MISSION IMPOSSIBLE- အဆင့်သာ ရှိသေးကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။ ရေးစရာ အချက်တွေ အများကြီး ကျန်သေးပေမယ့် စာရှည်လွန်းသွားသဖြင့် ဤနေရာမှာ ရပ်နားပါရစေ။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Thursday, March 29, 2012
ကြည့်ပဲ ကြည့်...မဝေဖန်နဲ့ ။
ရေးသားသူ - ---- at Wednesday, March 28, 2012
ဦးစီးချုပ်မိန့် ခွန်းကို ဟစ်ဟော့သီချင်းလို
မာမာအေးအသံနဲ့ ဆိုလိုက်ချင်ရဲ့ ။
ထုံးဖြူဖြူနဲ့ ဆွမ်းအုပ်တစ်အုပ်ကို သတိရလို့ ။
ပွဲခင်းထဲက ဆူညံသံတွေနဲ့ အတူ
သီတဂူဆရာတော် သြ၀ါဒနဲ့ 
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမိန့် ခွန်းနဲ့ 
Black ကာလာကို ၀တ်ချင်တယ်။
ABSDF မြောက်ပိုင်းက ရဲဘော်တွေကို
ဒေါက်တာချက်ကြီးနဲ့ ဒေါက်တာလွမ်းဆွေတို့ ရဲ့ ဘလော့ဂ်နဲ့ 
ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဒေါ်စုတို့ နဲ့ အတူပေါ့။
မိန်းမ ထောင်းတဲ့ ငပိထောင်းလောက်တောင် မကောင်းဘူးဗျာ။
မျက်ရည်လွယ်တဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ တွေ့ တိုင်း
အသုဘမှာ အငှားငိုဖို့ အသုံးဝင်သလိုလို
ဘ၀တွေဟာ ကချင်တိုက်ပွဲမှာ ဖင် ချ ခံရတဲ့ ကချင်မလေးလိုပဲ။
Kangaroo လိုလို ခုန်ဆွခုန်ဆွနဲ့ 
လက်နှစ်ဖက်ရှိပြီး အရမ်းတိုနေတော့ အသုံးမ၀င်
သူတို့ ထက် လက်တွေ့ ဆန်သလားလို့ ပါ။
မှတ်ချက်။ ။ ပျင်းနေလို့ ဟိုရောက်ဒီရောက် ရေးတာပါ။ ကဗျာမဟုတ်ပါ။
ရေးသားသူ - ---- at Sunday, March 25, 2012
DSC06668-600x398,aphoto by wgdperth on Flickr.
စတုဒီသာအလှူပါ … အလှူရှင်မိသားစုက နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ရပ်ကွက်ထဲက ကလေးတွေကို စတုဒီသာကျွေးမွေးလေ့ရှိပါတယ် … အများအားဖြင့် မုန့်ဟင်းခါးကျွေးလေ့ရှိပြီး တစ်ခါတစ်ရံ ထမင်းနဲ့ဟင်း ကျွေးပါတယ် … ဒီနှစ်မှာတော့ ထူးထူးခြားခြားဖြစ်အောင် ကြက်ဆီထမင်း ကျွေးတယ် … KCK ကနေ ပွဲ ၅၀၀ မှာပြီး အိမ်ရှေ့မှာ ခုံတွေခင်းကာ ကြိုက်တဲ့သူဝင်စား .. အ၀စားပါပဲ …။
Weiwei from Madalay Gayzette
ဓာတ်ပုံကို Click လိုက်ပါ။ ပုံတွေအများကြီး ကျန်ပါသေးတယ်။
"စနစ်ပြောင်းအောင်တိုက်ရမယ်။ တိုက်ပွဲဆိုတာ ရဲရင့်တဲ့သူတွေရှိမှ နိုင်တာကွ"
ကိုသိန်း ဒီလိုပြောတာကို ပရိတ်သတ်က တဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ လက်ခုတ်တီးကြပါတယ်။ သူရဲ့ ရဲရင့်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို သဘောအရမ်းကြလို့ ။
အဲဒိတုန်းက ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုသိန်းရဲ့ အသံ။
ခေတ်တွေလည်းပြောင်းလာပြီဆိုတော့ ကိုသိန်းတစ်ယောက် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ အမတ်ဝင်ရွေးခံပါတော့တယ်။
ဒီတစ်ခါတော့ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကနေ ပြည်သူ့ အမတ်လောင်းဖြစ်လာတဲ့ကိုသိန်းလို့ ပြောလို့ ရနေပြီ။
တနေ့ မှာ သူ့ ကို မီဒီယာတွေက အင်တာဗျူးတယ်။ နိုင်ငံရေးစနစ်ကို ဒိ့ထက်ကောင်းအောင် ဘယ်လိုပြောင်းရင် ကောင်းမလဲဆိုပြီး အင်တာဗျူးတဲ့စော်လေးက မေးတယ်။
"စနစ်ပြောင်းအောင် လုပ်ရမှာပေါ့နော်...။ တိုက်ပွဲဆိုတာ ရဲရင့်တဲ့သူတွေရှိမှ နိုင်တာပေါ့နော်"
အမတ်မဖြစ်ခင်တုန်းက အသံနဲ့ အမတ်ပြီးတော့ ကိုသိန်းရဲ့ အသံက ဂငယ်ဂွေ့ လို တဆစ်ချိုးပြောင်းသွားတာနဲ့ ပက်သက်ပြီး၊ ဘေးမှာ ဆိုက်ကားနင်းနေတဲ့ ကိုသာအေးက ဒီလိုမှတ်ချက်ချပါသတဲ့ဗျာ။
" ငါ-ိုးမသားတွေ မရတုန်းက တမျိူး၊ ရတော့တမျိူး...-ီးလိုမှိုလိုနဲ့ "
ကျောက်စိမ်းမိုင်းတွင်း (ဖားကန့် )
၂) အင်မတန်ကြီးတဲ့မိုင်းတွင်းဖြစ်ပြီး Traffic Management လို့ ခေါ်တဲ့ Stop Sign လုပ်ထားတာ၊ သတိပေးထားတာမရှိဘူး။
လူတွေရဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ တောတောင်ရေမြေကို မထိခိုက်ဖို့ အတွက် မိုင်းတူးတဲ့ကုမဏီတိုင်း လုံးဝတာဝန်ယူရတယ်။ သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနရဲ့ အလုပ်က Gudieline and Starndard သို့လိုက်နာရမဲ့စည်းကမ်းနဲ့ စည်းမျဉ်းသာ ချပေးပါ။ ပြီးရင် မိုင်းကုမဏီတွေ လိုက်နာလား မလိုက်နာလားဆိုတာကို ပုံမှန် Inspection and Assessment လုပ်ပေးယုံပဲ။ မလုပ်ဘူးဆိုရင် ဒဏ်ရိုက်ပြီး သူတို့ မိုင်းတူးလို့ မရအောင် လုပ်ထားပေးယုံပဲ။ ဒီလိုလုပ်ရင် သူတို့ ဂရုစိုက်လိမ့်မယ်။
ဒါဆိုရင် လူတွေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် ကောင်တယ်။
နာက်ပြီး ဘယ်ရောက်သွားလဲ နေရာတကာပါတဲ့ပညာရှင်တွေ။ ဘယ်မှာလဲ မီဒီယာတွေ ဒီကိစ္စကို ထောက်ပြကြတာလဲရှိလဲ။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Saturday, March 24, 2012
စောက်ကျင့်တွေကို ပြင်ကြဖို့ လိုပြီ
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ ရုပ်ပုံလွှာကို စာရေးဆရာတွေအများအပြား အမျိူးမျိုးဖွဲ့ ဆိုညွှန်းပြကြတယ်။ အားလုံးက သူဘယ်လောက်တော်ကြောင်းကောင်းကြောင်းကိုပဲ ညွန်းတယ်။ သူဘယ်လောက် သုံးစားမရကြောင်း၊ စောက်ရမ်းလုပ်တက်ကြောင်း ဘယ်သူမှ မရေးကြပါဘူး။ ဒီလိုရေးတဲ့စာရေးဆရာတွေကို တွေ့ ချင်ပါတယ်။
ရေးသားသူ - ---- at Saturday, March 24, 2012
ကြာလေကြာလေ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်းကို ကြည့်ရတာ မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးတာဝန်ခံ လို ဖြစ်နေသလားပဲ။ ကျနော်တို့ နယ်စပ်မှာတုန်းက အဖွဲ့ အစည်းတိုင်းမှာ မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးအတွက် တာဝန်ယူတဲ့လူတစ်ဦးရှိတယ်။ သူက ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ အဖွဲ့ အစည်းတိုင်းက လူတွေနဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးအောင်ပေါင်းတယ်။ အရက်ကလေးလည်း ပါတယ်ဆိုပါစို့ ။ အခုလည်း ဦးကျော်ဆန်းရဲ့ ပုံစံက လာသမျှလူ တွေ့ တယ်။ ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်တယ်။မီဒီယာပေါ်မှာ သူနဲ့ တွဲပြီး ရိုက်မှ ခေတ်မှီသလိုမျိူးဖြစ်နေတယ်။ အစိုးရဆီမှာ လူမရှိတော့ဘူးလားမသိဘူး။ ဦးကျော်ဆန်းလို ပုကွကွကို ကြည့်ရတာအတော်ရုပ်ဆိုးတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး စစ်တပ်ထဲကို ရောက်လဲတော့မသိဘူး။ပေမမှီဒေါက်မမှီနဲ့ ။
သူ့ ဖထွေးကို ဖား
သူ့ ဖထွေးကောင်းကြောင်း ကြွား
ဒီတစ်သက် ဘယ်တော့မှ နောင်တရပါ့မလဲ။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Tuesday, March 20, 2012
ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ဒေါ်စုရဲ့ တာဝန်
၂ဝ၁၄-မှာ အာဆီယံဥက္ကဌရာထူးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံက ယူပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေရာမှာ ပြောစရာရှိတာက မြန်မာနိုင်ငံက ဘယ်သူက တာဝန်ယူမှာလဲဆိုတဲ့ ကိစ္စဖြစ်နေပါတယ်။ ဦးသိန်းစိန်လား၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဝဏမောင်လွင်လား။ သူတို့ နှစ်ဦးစလုံးအနေနဲ့ လည်း ဒီရာထူးနဲ့ မကိုက်ညီပါဘူး။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့ မှာ လုပ်ငန်းဆောင်တာ ကိစ္စများတာအပြင် အခြားတာဝန်တွေလည်း ရှိနေသေးတယ်။ နောက်ပြီး အရည်အချင်းကစကားပြောပါတယ်။ ဘိုလိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်လည်လည်ပတ်ပတ်ပြောနိုင်ရပါ့မယ်။ နိုင်ငံတကာက လေးစားရတဲ့လူဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လည်း သိက္ခာတက်နိုင်သလို အာဆီယံအတွက်လည်း မျက်နှာပန်းလှစေပါတယ်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖတ်အကျိူးရှိစေမဲ့လူကို အာဆီယံကလည်း လိုလားနေပါတယ်။ နောက်ဆုံးကျနော့်သုံးသပ်ချက်ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒေါက်တာဆူဝန်ပစ်ဆူဝန်နေရာမှာ တာဝန်ယူပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာပြည်ရဲ့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအသစ် သို့ မဟုတ် အာဆီယံရဲ့ ဥက္ကဌအဖြစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တာဝန်ယူလိမ့်လို့ ကျနော်ယုံကြည်နေတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နိုင်ငံခြားကို မကြာခင်ခရီးသွားရလိမ့်မယ်လို့ ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကျနော့်သုံးသပ်ချက်ပါ။ ကျနော်တော့ ရင်ခုန်စွာနဲ့ စောင့်မျှော်နေပါတယ်ဗျာ။
ရေးသားသူ - ဘုန်းကျော် at Monday, March 19, 2012
NED က Internship ကိုလေးလသွားပါတယ်။ တစ်လကို စားပြီးသောက်ပြီး ဒေါ်လာလေးထောင်ရပါတယ်။ သူကလွဲရင် အခြားပါတီဝင်တွေ အန်အီးဒီမှာ အလုပ်သင်သွားလို့ မရပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ဒီနေ့ အထိ လူ့ ဘောင်သစ် ဥက္ကဌကြီး အမေရိကန်မှာရောက်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ ဖုန်းကို မီဒီယာများမယုံရင်ဆက်သွယ်ကြည့်ပါ။
ခင်ဗျားတို့ မယုံရင် ချင်းမိုင်က သူ့ အိမ်ကို သွားကြည့်ပါ။ နန်းတော်လိုပဲ။
ကျနော့်မှာ မိတ်ဆွေအတော်တော်များများရှိပါတယ်။ တချို့ က နိုင်ငံရေးလောကမှ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ ကအများစု။ အနည်းစုဖြစ်တဲ့ စာပေလောကမှ မိတ်ဆွေတွေလည်းရှိပါတယ်။ ကျနော့်မှာ အရှားပါးဆုံးမိတ်ဆွေလောကကို ပြပါဆိုရင် နိုင်ငံရေးမလုပ်တဲ့ မိတ်ဆွေနဲ့ စာပေလောက မိတ်ဆွေတွေဖြစ်တယ်လို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ လက်ရှိအလုပ်အကိုင်က မိတ်ဆွေတွေကတော့ အင်မတန်နည်းပါတယ်။
မိတ်ဆွေများတော့ ကောင်းပါတယ်။ ကူဖော်လောင်ဖက် ရတယ်ပေါ့ဗျာ။
ကျနော့်ပါးစပ်နဲ့ စိတ်က သူများနဲ့ မတူဘူးဗျ။ အထူးသဖြင့် စိတ်မထင်ရင် မထင်သလို ကြီးကြီးငယ်ငယ်နားမလည်ဘူး။ ကိုယ်ပြောချင်ရင် ပြောချလိုက်တဲ့ အကျင့်က စွဲနေတယ်။ ဒါကိုပြင်လို့ တော့ရပါတယ်။ ဟန်ဆောင်ပြီး ပြင်ရတာကို အရမ်းပင်ပန်းလို့ယနေ့ အချိန်အထိမပြင်ပဲနေခဲ့တယ်။
အခုတော့ ကျနော်ရဲ့ စရိုက်ကြောင့် တချိန်က ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ စွန့် ခွာတာကို ခံရပါပြီ။ ကျနော် ရင်နဲ့ မမျှ ခံစားရသောကြောင့် ဒီစာကို ရေးပါတယ်။ အရမ်းထူးခြားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ တစ်စုတော့ရှိပါတယ်။ သူတို့ ကတော့ ကျနော့်ငယ်သူငယ်ချင်းတွေပါ။ ယနေ့ အချိန်ထိ ကျနော်ဘာပဲပြောပြော သူတို့ ကျနော့်ကို သူငယ်ချင်းအဖြစ်ကနေ မစွန့် လွှတ်ပါဘူး။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ သူငယ်ချင်းအစစ်အမှန်ဖြစ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ယနေ့ ကာလမှာ အိုင်တီနည်းပညာက အတော့်ကို ထွန်းကားပါတယ်။ ဖေ့ဘွတ်စ်တို့ ဂျီတော့တို့ အပြင် အခြားနည်းပညာတွေလည်း မိုးဦးကျမှာပေါက်တဲ့ မျှစ်တွေလို အလျှိုလျှိုထွက်လာကြတယ်။ ဒီထဲကနေ ကျနော်အမြဲတန်းသုံးနေကြ ဖေ့ဘွစ်နဲ့ ဂျီတော့အကြောင်းကို ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ လူတိုင်းနီးပါး ဖေ့ဘွတ်စ်ပေါ်ကနေ သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြ၊ ဂျီတော့ပေါ်ကနေ သူငယ်ချင်းတွေရကြပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ အပြင်မှာ မသိသူကော သိသူကော ဖေ့ဘွတ်စ်ရဲ့ တန်ခိုးစက်ကြောင့် အလိုအလျှောက် သူငယ်ချင်းတွေတစ်ပုံကြီးရပါတယ်။
ကျနော်ကလည်း ခေသူမဟုတ်လေတော့ ကျနော့်မှာလည်း သူငယ်ချင်းတွေရှိပါတယ်။
ကျနော့်သူငယ်ချင်းတွေကို စချင်တဲ့အချိန် ကျနော်စပါတယ်။ ဆဲချင်တဲ့အချိန် ကျနော်ဆဲပါတယ်။ ချစ်တယ်လို့ ပြောချင်တဲ့အချိန် ကျနော် အီစီကလီလုပ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခါမှတော့ မိန်းမရှိရဲ့ သားနဲ့ ဆော်မငမ်းပါဘူး။ ငါ့မှာ ခလေးသုံးယောက်ရှိတယ်နော်လို့ ပဲ သတိပေးစကားပြောခဲ့ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံး ကျနော်အဓိကပြောချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းအကြောင်းကို နဲနဲလောက်မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဖေ့ဘွတ်စ် စပြီးသုံးတတ်ခါစမှာ သူငယ်ချင်းစုဆောင်းရပါတယ်။ အရင်ဆုံး တွေ့ တဲ့သူငယ်ချင်းတွေကတော့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ လူ့ ဘောင်သစ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီက ရဲဘော်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပြီး တော်လှန်ရေးအသိုင်းအဝန်းက မဟာမိတ်တွေလည်း ပါတယ်ဆိုပါစို့ ။
သူတို့ နဲ့ ပထမဆုံးစတွေ့ ခါစမှာ အရမ်းကို ပျော်ရွှင်စရာကောင်းလှပါတယ်။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် စကြ နောက်ကြ ကြပ်ကြနဲ့ ဆိုတော့။ နောက်ပိုင်း ကျနော့်ပါးစပ်ကလည်း အငြိမ်မနေ တော့ သူတို့ မကောင်းကြောင်း အင်တာနက်မှာရေးမိပါရော။ ဆဲမိပါရော။
ဒါနဲ့ ကျနော်အရမ်းချစ်ရတဲ့ ကျနော့်ဥက္ကဌကြီး ကိုအောင်မိုးဇော်တစ်ယောက် ကျနော့်ရဲ့ ဖေ့ဘွတ်စ်သူငယ်ချင်းအဖြစ်ကနေ သူ့ ဆန္ဒအရ မပြောမဆို နုတ်ထွက်သွားပါလေရောဗျာ။ ဒါနဲ့ ပက်သက်ပြီး ကျနော်စဉ်းစားနေမိတယ်။ ဘာများဖြစ်လို့ လဲပေါ့။ သူ့ ဘောကိုတော့ ကျနော် ဒုတ်နဲ့ မထိုးမိပါဘူးဗျာ။ သူစွန့် ပစ်သွားတော့ ကျနော့်မှာ ရင်ကွဲပက်လက်ကျန်ခဲ့ပြီး ဘီယာတွေ စွတ်သောက် သေးတွေစွတ်ပေါက်ပြီး အလွမ်းဖြေခဲ့ရပါတယ်။ အတော်ရက်စက်တဲ့ ဥက္ကဌကြီးရယ်....ပြန်လာပါတော့လို့ ဆိုပြီး မျက်ရည်စက်လက်နဲ့ပြောရမလိုပဲ။
ကျနော်ကလည်း ကျနော်ပဲ သူမကြိုက်တဲ့အကြောင်းအရာကို ပြောမိတာကိုး။ သူအကြိုက်လိုက်ပြောတဲ့နေ့ တွေတုန်းကဆိုရင် သူ့ ခင်ဗျာ ဗိုက်ပူကြီးပွတ်ပြီး တဟီးဟီးနဲ့သြစတြေးလျက မြင်းကြီး ကျနေတာပဲ။ ဒါက သူ့ နဲ့ ကျနော် ဖေ့ဘွတ်စ်သူငယ်ချင်းအဖြစ်ကနေ စွန့် လွှတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း။
နောက်တစ်ယောက် ။ သူလည်း ကျနော်နဲ့ အတော်ရင်းနှီးပါတယ်။ သူက ကျနော့်ဆရာ။ တရားဝင်သူ့ ကိုပြောပြီး ကျနော် ဆရာတင်ထားတာပါ။ သူ့ ရဲ့ ဘာသာပြန်တွေကို အရမ်းသဘောကျလို့ ပါ။ နောက်ပြီး အေးချမ်းတည်ငြိမ်တဲ့ ရုပ်ရည်နဲ့ ရိုးသားဟန်ကို နှစ်ခြိုက်မိလို့ပါ။ သူ့ နာမည်ကတော့ နာမည်ကြီး ကဗျာဆရာ ယောဟန်အောင်လို့ ခေါ်တဲ့ ကိုအောင်သူငြိမ်း။ သူနဲ့ ကျနော်နဲ့ က ဖေ့ဘွတ်စ်သူငယ်ချင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျီတော့မှာလည်း သူငယ်ချင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ ကို ကျနော်က မှုးလာတိုင်း ကိုအောင်သူငြိမ်းက လူတော်ပဲဗျလို့ ပြောတယ်။ ရုပ်ရည်လည်း မဆိုးဘူး။ ဟားဗက်တက္ကသိုလ်က ဘွဲ့ ကြီးလည်းရထားတော့ ကျနော်အထင်ကြီးတယ်ဗျာလို့ ပြောတယ်။ သူလည်း သဘောကောင်းပြီး ကျနော့်ကို သူ့ အိမ်မှာတောင် ခေါ်ပြီး အလကားပေးနေခိုင်းသေးတယ်။ ဒီလောက်ထိ သဘောထားပြည့်ဝတဲ့ လူတစ်ယောက်။ နယ်စပ်မှာကျန်ခဲ့တဲ့ သူ့ ရဲဘော်တွေကိုလည်း တက်နိုင်သလောက် သူပေးကမ်းပါတယ်။ ကူညီပါတယ်။
တနေ့ တော့ ကျနော်မူးပြီး....ကျနော့်ရဲ့ ဂျီတော့ရဲ့Status မှာ ဒီလိုရေးမိပါတယ်။
"အတိုက်အခံကော နအဖကော -ီးပဲ" လို့ ....။
ကျနော့်ဆရာ ကိုအောင်သူငြိမ်းက ဘာပြန်ပြောတယ်မှတ်လဲ။
"မင်းကိုလည်း -ီးပဲ" တဲ့ဗျာ။ ဒီလိုပြောပြီး သူလည်း ကျနော့်ကို ဖေ့ဘွတ်စ်သူငယ်ချင်းအဖြစ်ကကော၊ ဂျီတော့ သူငယ်ချင်းအဖြစ်ကကော စွန့် လွှတ်လိုက်တာဆိုရင် အခုဆိုရင် အတော်ကြာနေပြီ။ ကျနော့်ခဗျာ သူဒီလို စွန့် ခွာထွက်သွားတဲ့နေ့ ကဆိုရင် သူ့ ကို သတိရလို့ ဘီယာတွေစွတ်သောက် တွေစွတ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ ရက်တွေကို လွမ်းလွမ်းဆွေးဆွေးကျော်ဖြတ်ခဲ့ရပါတယ်။
ဒါက ကိုအောင်မိုးဇော်နဲ့ ကိုအောင်သူငြိမ်းတို့ ရဲ့ အကြောင်းမကြားပဲ တရားဝင်ခွဲခွာခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးပါ။ နောက်တစ်ယောက်ရှိသေးတယ်။ သူကတော့ ကမ္ဘာကျော် တော်လှန်ရေးသမား ကိုမိုးသီးဇွန်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ သူလည်း လူဆိုး။
အရင်တုန်းကဆိုရင် လူချင်းမတွေ့ ပေးမဲ့ ဘုန်းကျော်လုပ်တာကောင်းတယ်လို့ သူချီးကျူးပါတယ်။ ကျနော်လည်း ကိုမိုးသီး ဖဲ့တာကို ကျနော်ကြိုက်တယ်လို့ ဆိုပြီး သူ့ ကိုမြှောက်ပေးနေကြ။ သူ့ ခဗျာ အဲဒီတုန်းက ရုပ်ကြမ်းကြီးနဲ့ တဟီးဟီးနဲ့ ဖြစ်နေမလားပဲ။ သူနဲ့ ကျနော်နဲ့ က ဖေ့ဘွတ်စ်မှာကော ဂျီတော့မှာကော သူငယ်ချင်းအရင်းခေါက်ခေါက်ကြီးတွေဗျ။ အရမ်းလည်း ခင်ကြပါတယ်။
တနေ့တော့ ကျနော့်ကို ကိုမိုးသီး စွန့် ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ မေးလိမ့်မယ်။ မင်းက ဘာများသွားပြီးလုပ်မိလို့ လဲဆိုပြီးမေးကောင်းမေးနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တစ်ခုပဲလုပ်ခဲ့မိပါတယ်။ ဒါကတော့-
ကိုမိုးသီးဟာ အမေရိကားမှာ ငွေရမဲ့အလုပ်ကို မလုပ်ပဲ၊ အင်တာနက်မှာထိုင်ပြီး အချိန်ဖြုန်းတယ်။ သူများချက်ကျွေးတာကို စားတယ်။ ပြီးရင် ပန်းကန်လည်းမဆေးဘူး။ အောက်သက်လည်းမကျေဘူးဆိုပြီး အင်တာနက်မှာကျနော်ရေးခဲ့မိပါတယ်။ ဒါလည်းရေးပြီးကော ကိုမိုးသီး ကျနော်ကို ဂျီတော့ကရော ဖေ့ဘွတ်စ်ကပါ သူငယ်ချင်းအဖြစ်ကနေစွန့် လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီတကြိမ်လည်း ကျနော့်မှာ ဘီယာတွေစွတ်သောက်သေးတွေ စွတ်ပေါက်ခဲ့ရပါတယ်ဗျာ။ ကျနော်က အမှန်ကိုပြောတာကို သူစိတ်ဆိုးသွားတာတော့ မတတ်နိုင်ဘူး။
တခြားသူငယ်ချင်းတွေလည်းအကြိမ်ကြိမ် ကျနော့်ကို စွန့် ခွာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလောက်ထိဖြစ်လာတော့ ကျနော်မှားတော့မှားနေပြီဆိုပြီး ပါးစပ်ကို ပိတ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုတော့ မပိတ်နိုင်လို့ ဒီစာကိုရေးရပါတယ်။
ထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုကို ပြောပြချင်တယ်။ ဒါကတော့ သူ့ ကိုဘယ်လောက်ပဲပြောပြော သူ ကျနော့်ကို သူငယ်ချင်းအဖြစ်ကနေ မစွန့် လွှတ်ဘူး။ အရမ်းကိုများရင့်ကျက်လို့ လား။ ဒါမှမဟုတ်အရည်ထူလို့ လား။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ ကိုတော့ လေးစားမိပါတယ်။ သူ့ နာမည်က ဒေါက်တာနိုင်အောင်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ နာမည်ကြီးပြီး လူကြိုက်နည်းနေတဲ့လူတစ်ဦးလို့ ပြောရင်မှန်မလားပဲ။
သူ့ ကိုဆဲလည်း သူမနာ။ သူ့ ကို ထုလည်း သူမပု၊ ဂရုတောင် မစိုက်ဘူးလို့ ဆိုပြီးတောင် ကဗျာဆပ်ရတော့မလိုပဲ။ ယနေ့အထိသူ့ကို ကျနော့်ရဲ့ ဖေ့ဘွတ်စ်မှာ တွေ့နေတုန်းပါ။
သူတို့ ရဲ့ ကွဲပြားခြားနားချက်ကို ကျနော်တွေ့ ရတယ်။ ဒါက ကျနော်နိဂုံး။ ဘာဖြစ်လို့ များ ကိုမိုးသီး၊ ကိုအောင်သူငြိမ်း၊ ကိုအောင်မိုးဇော်တို့က ကျနော်ပြောတာကိုနာတာလဲ။ ဘာ့ကြောင့်များ ကျနော့်ကို သူတို့ ပဲသဘောတူကြည်ဖြူပြီး သူငယ်ချင်းလုပ်ပြီး၊ သူတို့မကောင်းကြောင်းပြောတော့ စိတ်ဆိုးပြီး ထွက်ပြေးတာလဲ။ တကယ်တမ်းဆိုရင် ကိုနိုင်အောင်လို ခပ်တည်တည်ပဲနေရမှာပါ။
သူတို့ က လူကြီးတွေ။ ကျနော်က လူငယ်။ သူတို့ မှာ ဒီမိုကရေစီအတွေ့ အကြုံအများကြီးရှိတယ်။ ကျနော့်ထက်ပညာအများကြီးတတ်ပါတယ်။ လုပ်သက်ကလည်း ရင့်ပါပေ့။ ဒါနဲ့ များဗျာ ခလေးတွေလို စိတ်ဆိုးစရာလိုလို့လား။ မလိုဘူးလို့ထင်ပါတယ်။
သြစတြေးလျ ပါလီမန်ထဲမှာ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်နဲ့ အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေ အကြိတ်အနယ် ငြင်းခုန်နေတာကို တီဗွီမှာ ခဏခဏ သတိထားပြီးကျနော် ကြည့်ပါတယ်။ တစ်ယောက်မကောင်းကြောင်း တစ်ယောက်အားနည်းတဲ့အချက်တွေကို မျက်နှာတွေ ရှုံ့ မဲ့ပြီး ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်ကြတယ်။ တစ်ယောက်ကသာရင် အနောက်က အားပေးသူတွေက လက်ခုတ်တွေတီး အသံတွေဆူညံပြီး အားပေးကြတယ်။ ပါလီမန်ထဲကထွက်လည်းထွက်ရော အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်တွေကို အမတ်တွေကော လည်ပင်းဖတ်ပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲဗျ။ သူတို့ ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က သူတို့ပြောနေဆိုနေတာတွေက ပြည်သူလူထုအတွက်ပဲ။ သူတို့ နှစ်ယောက်အတွက်မဟုတ်ဘူး။
ဒီအပေါ်မှာအခြေခံပြီး ခံစားချက်ထားပြီး တိုက်ခိုက်ကြတယ်။ ဝေဖန်ကြတယ်။ ဆိုတော့ သူတို့ ရဲ့ နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုက အတော်လေးကို အတုခိုးစရာကောင်းနေတယ်။
ဒီလိုပုံစံမျိူးကျနော်တို့မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးအတိုက်အခံလောကမှာတောင် မရှိသေးဘူး။ အခု ဖေ့ဘွတ်စ်နဲ့ ဂျီတော့ပြသနာပဲကြည့်ပါ။ ဒါတောင် အွန်လိုင်းမှာပဲရှိသေးတယ်။ တကယ့်လက်တွေ့ပါလီမန်ထဲမှာကော အပြင်မှာကော ကိုမိုးသီး၊ ကိုအောင်မိုးဇော် နဲ့ ကိုအောင်သူငြိမ်းတို့ ကိုလက်ညိုးထိုးပြီး ခင်ဗျားတို့ စောက်သုံးကို လုံးဝမကြဘူး၊ ပေါချောင်ကောင်းခေါင်းဆောင်တွေလို ပြောများပြောရင် ကျနော့်ကိုဝိုိုင်းထိုးကြမလားမသိဘူး။
ဒါ့ကြောင့် ဒေါက်တာနိုင်အောင်ရဲ့ ဖေ့ဘွတ်စ်သူငယ်ချင်း စိတ်ဓာတ်ကို အားလုံးရှိထားကြဖို့ အတွက် မြန်မာ့အရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ လူကြီးများကို တိုက်တွန်းပါတယ်။
မှန်ချက်။ ။ ဒီစာထဲမှာ ကျနော့်ကို သူငယ်ချင်းအဖြစ်ကနေ စွန့် လွှတ်တဲ့လူတွေ အားလုံးမပါတဲ့အတွက်တောင်းပန်ပါတယ်။
THE LADY AND THE PRESIDENT – (သို့ မဟုတ်) MISSION ...
မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ရှိမှ တိုင်းပြည်ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက...